Ama-header e-fur ngeke aphume emfashini, ngenkathi emhlabathini kukhona i-autumn nobusika. Izigqoko ze-Fur zivikela ikhanda kahle kusukela kokubili amaqhwa amancane nezinzima. Abakhiqizi abaningi befashini bavame ukulungisa amaqoqo omlilo omusha. I-head mink iyinduduzo, imfudumalo nenjabulo. Futhi abesifazane abaphethe izigqoko ze-mink ezinhle babangela ukuba abantu bajabule. Isitayela esisodwa embonini yokukhiqiza izigqoko asikho futhi yonke indlu yezemfashini inikeza umbono wayo ngalokho izigqoko ze-mink zingaba khona. Ngakho-ke, emakethe ungabona izinhlobonhlobo zezigqoko zoboya, futhi ungakhetha imodeli oyodinga.
Izinhloko zekhanda lekhanda
Ama-caps eyenziwe nge-mink angagcina izinga lokushisa elizinzile nelomnandi, elikwazi ukugcina ukushisa. Ngisho nama-frost aqinile ebusika, ngeke ushiswe kule cap. Umbala woboya uhluka kusuka kumhlophe kuya kumnyama. Muva nje, ama-hood we-mink we-sheared asebenze imfashini, iningi loboya liyakunqunywa kuwo, futhi ungqimba oluphansi luhlala phezu kwesikhumba. Kuzo zonke lezi zinto, izici zihlala, kodwa inkokhelo ngeke ibe yinkimbinkimbi kangaka.
Ezinhlobonhlobo ezithandwayo zezigqoko ze-mink, ungakhuluma nge-cap-cone, kubukeka kuhle ngezinwele ezinde. Ngaphambili "i-Mashenka" yayimfashini, lesi sihloko sekhanda sasikhumbuza i-hood yasendulo, manje kubhekwe njengento eqondile. Kodwa ama-berets alula avela emkhathini we-sheared azofanelana nabesifazane ababili bebhizinisi nabafundi.
Emafeshini yanamuhla ayikho imingcele eqinile, futhi manje ingubo yesikhumba seminki igqoke kalula ngezicathulo zezemidlalo nama jeans. Kodwa uma ukhetha isihloko sekhanda, zama ukuhlanganisa nezingubo zangaphandle. Isibonelo, ngombala, kufanele kube eduze nombala wengubo yoboya noma ijajethi.
Uma uthenga ingubo ekhanda eyenziwe nge-mink, hlola ubomvu, izinwele akufanele ziphule futhi ziqhume, ubomvu kufanele bube nempilo futhi bube mhlophe. Kufanele uhlole izingxube, akufanele kube khona amaconsi ama-glue, izimbobo, izigxobo ezikhohlisayo. Esihlokweni esifanele, ubuchopho kufanele buhambe ngendlela eyodwa, izikhumba kufanele zivumelane ngokuqinile komunye nomunye.
Amanani wezigqoko ezivela ku-mink aqala kusukela ku-5000 ruble. Futhi ukuthenga ikhanda elingabizi, qaphela, ngoba i-mink cap eshibhile kakhulu ingaba yinkohliso.
Ipaki lamathambo aliphuli: indlela yokugqoka nokuthi yini okufanele ugqoke ipaki, isithombe
Amazambane othosiwe ngamakhowe nokhilimu
Indlela yokudweba isihlahla sikaKhisimusi ngamathoyizi kanye nezigcawu zikaKhisimusi ngezigaba kulula futhi zinhle: amakilasi amahle abantwana
Indlela yokushaya ijaji eliphansi ngemuva kokugeza?
UJulia Volkova wembula imfihlo kaBach "Alexei Vorobyov
Ungathola kanjani isibalo esiphelele?